संविधान र संसद् बचाउनका निम्ति देउवालाई समर्थन गरेको भनेर दिउँसै रात पार्ने ? पार्वत गुरुङको अन्तर्वार्ता - samayapost.com
समयपोष्ट २०७८ जेठ १५ गते ८:०८
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लाने वर्तमान सरकारको कुनै साेंच थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाट विश्वासको मत दिएको भए, आफ्नै पार्टीका १२१ सांसदमध्ये २६ जना सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेको भए, आज के संसद् विघटन हुन्थ्यो ? मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जान्थ्यो ? यो परिस्थितिको निर्माण कसले ग¥यो ? अहिले उहाँहरु भन्नुहुन्छ, संविधान र संसद् बचाउनका निम्ति हामीले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको हो । दिउँसै रात पार्ने ? स्थिर सरकारलाई अस्थिर बनाउने, आफ्नै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्ने, अनि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने ? जसले पार्टी निर्णयको विरुद्धमा गएर क्रियाकलाप गर्छ, उसैले संविधान र संसद् बचाउने ? हाम्रै पार्टीका साथीहरुले आज जसरी राजनीतिक जवाफदेहिताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ ? यस्तो गैरसंसदीय अभ्यासले हामी कहाँ पुग्छौंँ ? मध्यावधिको बाटो लिन बाध्य बनाउने को ? जसले असंसदीय बाटो अँगालेको छ, उनीहरु नै आज त्यसको भागीदार हुन् ।
संविधानलाई सम्मान र सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्दै उहाँ अगाडि बढिरहनुभएको छ । मधेशी जनताको युगौँयुगदेखिको माग सम्बोधन भएको छ । मधेशी जनता तथा मधेश पक्षधर राजनीतिक दलले मधेशको मात्र मुद्दा उठाउन नपरोस् भनेर समृद्ध मधेशको दृष्टिकोण बोकेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुुभयो । उक्त अभियानबाट त्रसित भएर फेरि पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने मधेशमा पनि उहाँको प्रभाव बढ्ने भयो भनेर केहीलाई चिन्ता थपिएको छ ।